Maraykanka oo u muuqda mid ka quustay fallaagada Tigreega & wefdi heer sare ah oo berri tegaya Addis Ababa | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Maraykanka oo u muuqda mid ka quustay fallaagada Tigreega & wefdi heer...
Maraykanka oo u muuqda mid ka quustay fallaagada Tigreega & wefdi heer sare ah oo berri tegaya Addis Ababa
(Addis Ababa) 05 Jan 2022 – Ergeyga Maraykanka ee Geeska Afrika, Jeffrey Feltman, ayaa booqan doona dalka Itoobiya Khamiista si uu kulamo ula yeesho madaxda sare ee DF si uu ula qaadaa dhigo wada-hadallo nabadeed oo la galo, sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda Arrimaha Dibadda Maraykanka, dedaaladii ugu dambeeyay ee Washington ay ku doonayso in lagu soo afjaro colaadda.
Dagaalka muddada sanadka ah socdey ee u dhexeeyay Dowladda Itoobiya iyo hoggaanka gobolka Tigraay, oo ka mid ah dagaalladii ugu dhiig daadiska badnaa ee Afrika, ayaa waxa ku dhintay kumannaan qof oo rayid ah, malaayiin kalena way ku barakiciyeen.
Washington ayaa marar badan ku baaqday in la joojiyo colaadda iyo in wadahadal lagu dhammeeyo colaadda, la joojiyo xadgudubyada xuquuqul insaanka, iyo in aan gargaarka bini’aadminnimo oo aan la carqaladayn.
“Feltman wuxuu tegi doonaa Addis 6-da Jannaayo si uu kulamo ula yeesho madaxda sare ee Dowladda si uu ugala hadlo wada-hadallada nabadda,” ayuu yiri sarkaal ka hadlay socdaalka Feltman ee Addis Ababa.
Ciidamada Tigreega ee dagaalka kula jira dowladda dhexe ayaa bishii hore isaga baxay gobollada deriska la ah ee waqooyiga Itoobiya kaddib markii looga itaal roonaadey dagaalladii ugu dambeeyey ee ay mar ku sheegayeen inay caasimadda ku qabsanayaan.
Todobaadki hore, af hayeenka Wasaarada Arimaha Dibada ee Maraykanka, Ned Price, ayaa sheegay in Dowlada Ethiopia ay ballanqaaday in aysan ku tala jirin in ciidamadeedu galaan Gobolka Tigraay, oo ay fursad u siinayso inay dhinacyadu iskugu yimaadaan miiska wada hadalka.
Balse duqeymaha cirka ah ee ka socda Tigrayga ayaa sii socday, waxaana lagu soo waramayaa in ay ku dhinteen tobanaan qof oo rayid ah, mana jirto kolonyo gargaar ah oo u suurtagashay in ay gudaha u galaan tan iyo bartamihii bishii Diseembar, xafiiska isku xirka arrimaha bini’aadminnimada ee Qaramada Midoobay ayaa warbixin uu soo saaray Dis. 30 sidaa ku sheegay.
Maraykanka iyo reeg Galbeedka ayaan qarsanin inay la safan yihiin fallaagada Tigreega.
Previous articleMa jiro qof ku fikiri kara in meesha sidaa u qoyan una cagaarani ay la degaan ku taallo (Ogow qorshaha sidaa looga dhigay)
Next articleSweden oo ay fara ba’an ku hayaan dad soo qoraya dawooyin aan sax ahayn (Dhegeyso)